Presbyopia iyo hyperopia Maxay yihiin iyo side loo daweeyaa? | Ragga Stylish
Presbyopia iyo hyperopia Maxay yihiin sideese loo daaweeyaa?
Dhibaatooyinka baalasha indhaha ama presbyopia Waxay u muuqdaan inta badan 90% ragga da'doodu tahay 45 jir. Tani waa xaalad caadi ah oo gabow ah waxayna ku sii kordhineysaa wixii saameyn ah ee ficil-celin ah ee qofku leeyahay. Haddii aad leedahay aragti fog, myopia, ama astigmatism, ragga da'daan waxay bilaabaan inay yeeshaan dhibaatooyin xagga aragtida ah.
Marka xigta, waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo la xiriira dhibaatadan aragtida, waxaan kaa caawinaynaa inaad aqoonsato astaamaheeda oo aad aragto dhammaan xalalka suurtogalka ah. Ma rabtaa inaad wax walba ka barato?
1 Presbyopia iyo saameynteeda
2 Sidee lagu baaraa maxaase lagu daweeyaa?
3 Sidee ayey presbyopia iyo hyperopia u kala duwan yihiin?
4 Machadka Sare ee Ocular
Presbyopia iyo saameynteeda
Waa xaalad caafimaad oo caadi ah oo la xiriirta da'da. Aad iyo aad u badan saacado ayaa lagu qaataa shaashadaha hortooda oo cidhiidhiga indhaheenna si aan u aragno walxaha fog ama kuwa dhow.
Sanadihii la soo dhaafay, araga "taayirada" iyo waxa aan ugu yeerno 'presbyopia' ayaa soo baxa. Dhibaatadani waxay dhacdaa xilligan markii muraayadayada dabiiciga ah, loo yaqaan crystalline, wuxuu bilaabaa inuu noqdo mid jilicsan oo adkaada. Tani waxay sababi kartaa dhibaatooyin inay beddelaan qaabka dadaallada wax lagu arko waxayna keenaysaa cillad muruqyada ku hareeraysan. Markay taasi dhacdo, hoyga ayaa lumay halka muraayadaha looga baahan yahay inay soo boodaan si ay si dhow diiradda u saaraan.
Sidaa darteed, waxaan u aragnaa dhibaato ku dhowaad 90% ragga ragga ah ee ka weyn 45 sano inaan si dhow diiradda u saarno. Astaamaha ugu caansan ee lagu garto cudurka presbyopia waa:
Daal muuqaal ah Waxay ka dhacdaa inta badan meelaha nalalka liita.
Dhibaato diirad saarida walxaha si dhow. Marka aan dooneyno inaan aqrino warqad ama aan wax dhow ku aragno, laakiin sifiican ugama fiirsan karno oo waxaan aragnaa jahwareer.
Madax xanuun Dareenka xad dhaafka ah ee looga baahan yahay magdhawga deganaanshaha diiradda ayaa sababa madax xanuun daal.
Dib udhac dheer. Waxay dhacdaa marka aan fiirineyno wax isku dhow in muddo ah waxayna nagu qaadataa waqti dheeri ah si aan meel uga soo wada jeesanno wax fog.
Calaamad aad u muuqata oo ka muuqata dhammaan dadka dhibaatadan ka cabanaya ayaa ah inay ka weecato maaddada akhriska si ay diiradda u saarto.
Sidee lagu baaraa maxaase lagu daweeyaa?
Presbyopia waa in la daaweeyaa isticmaalka muraayadaha indhaha, haddii kale hawl maalmeedku aad bay u adkaadaan. Akhrinta wargeys fudud subaxdii waxay noqon kartaa dhibaato culus haddii aad leedahay isha indhaheeda. Markaad gaarto da'da 45 sano waxaad haysataa nolol wax soo saar leh runtiina waa dhibaato inaad yeelato dhammaan calaamadaha kor ku xusan. Intaas waxaa sii dheer, tani waxay sidoo kale sababtaa kororka dhibaatooyinka sida dhiig-baxa iyo horumarka indha-fiiqista.
Ciladda waxaa lagu sameeyaa baaritaanka aragtida caadiga ah. Xaaladda aragtida ayaa lagu qiyaasaa dhow iyo fogba. Dhakhtarka indhaha wuxuu mas'uul ka noqon karaa inuu meesha ka saaro cudur kasta oo kale oo leh qiimeyn dhameystiran oo ku saabsan isha isha.
Si aan u bilawno daaweyn ku filan, waa inaan diirada saarnaa nooc bukaan ah, da'da ay ku bilaabatay dhibaatada iyo howlaha maalinlaha ah. Muuqaal aad muhiim u ah in la tixgeliyo ayaa ah haddii bukaanku leeyahay cillad soo noqnoqota.
Waxaa jira muraayadaha weyneeya kuwa u baahan inay wax akhriyaan, laakiin ma aha hab daaweyn ama hab daaweyn ah. Daaweyntu waxay leedahay ujeedada siiyaan aragti dhammaystiran illaa 33 cm fog. Dhammaan kuwa leh dhibaato aragga leh diopters ka 1 illaa 3 ayaa mari kara.
Haddii aad rabto inaad ku hesho sixitaan muuqaal ah oo fog iyo mid fog oo isku lenses ah, waa inaad sameysaa dawo shaqsiyeed oo shaqsiyeed. Badanaa way ku kala duwan tahay il kasta. Presbyopia waa mid horumarsan sanad kasta iyo badh ilaa sadex sano qadarka lagu daro ee lagu daro qaybta hoose ee muraayadaha ayaa isbadalaysa sidaa awgeed dawada ayaa isbedelaysa.
Muraayadaha ugu fiican ee noocan ah dhibaatooyinka aragga waa kuwa horumarsan. In kasta oo bilowga aan u baahanahay muddo la qabsi, haddana iyagu waa kuwa dammaanad ka qaadaya aragti wanaagsan oo ka fog iyo ka fog iyo ka dhexe.
Sidee ayey presbyopia iyo hyperopia u kala duwan yihiin?
Mararka qaarkood waxaan isku qaldinnaa labadan fikradood. Ku astaamaha presbyopia iyo hyperopia Way isku egyihiin laakiin isku mid ma aha. Ku wareer noqo meel u dhow dhibaatooyinka diiradda saaraya sheyga.
Farqiga udhexeeya cilladahaan araggu waa asalka. Sababta dabacsanaanta lens-ka ee soo saarta daawada loo yaqaan 'presbyopia' waxay ku dhacdaa dadka jira 45 sano ama ka weyn. Si kastaba ha noqotee, cudurka 'hyperopia' waxaa sabab u ah hiddo-wadaha isha ee isha. Waxay dhacdaa marka cabirka ishu ka yaryahay kan caadiga ah. Badanaa waxay ku soo muuqataa carruurta iyo dhalinyarada.
Daaweynta 'presbyopia', muraayadaha indhaha ayaa lumiya awoodda ay u leedahay inay rogrogto sannado badan dabacsanaantuna uma oggolaanayso inay la jaanqaado qaababka.
In kasta oo labaduba saameyn ku yeeshaan masaafo gaaban, buunbuunin ku jirta qalin jabinta sare waxay u horseedi kartaa cilladaha aragga ee fogaanta iyo masaafada dheer. Presbyopia waxay gebi ahaanba la xiriirtaa da'da. Astaamuhu waxay bilaabaan inay muuqdaan markay yihiin 40-45 da'da
Machadka Sare ee Ocular
Machadka Indhaha Sare wuxuu ku shaqeeyaa muraayadaha indhaha ee horumarka leh oo kaa caawin doona inaad xalliso astaamaha ugu caansan ee aragga daalan. Si aad ula xiriirto iyaga, waa inaad iska diiwaangelisaa websaydhkooda oo ay kula soo xidhiidhi doonaan. Mar alla markii aad hadasho, waxay jadwalaan baaritaanka indhaha si ay u qiimeeyaan kiiskaaga. Waxay had iyo jeer dooran doonaan optics-ka ugu dhow gurigaaga si raaxadaadu ugu fiicnaato.
Waxay kuxirantahay cilad-sheegashada, waxay faahfaahin ka bixin doonaan daaweynta ku saleysan isticmaalka muraayadaha horumarsan ee adiga kugu habboon. Maalmo yar gudahood waad soo qaadan kartaa oo waad iska illoobi kartaa saameynta cudurka loo yaqaan 'presbyopia'.
Waxaa jira shirkado badan oo mas'uul ka ah daaweynta indhaha oo bixiya sixitaanka iyo daaweynta aragga daalan. Xulashada xiisaha leh waxay noqon kartaa Instituto Superior Ocular sababteeda qiimaha. In kasta oo araggu yahay arrin muhiim u ah nolosheena, haddana waa inaan ku sii jirnaa miisaaniyadda. Qiimayaasha hay'adani way hooseeyaan tan iyo markii muraayadaha indhaha ay toos uga yimaadaan shaybaaradooda.
Dhinaca kale, waxaa muhiim ah in la sameeyo qorshe daaweyn casriyeysan oo shaqsiyeed. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad wax soo saartid oo aad soo bandhigto xalal cusub.
Hadda oo aad ogtahay saameynta, sababaha, iyo cawaaqibta daawada presbyopia, waxaa la joogaa waqtigii la fiirin lahaa aragtidaada indhaha. Xusuusnow haddii aad si dhakhso leh u daweyso, wax dhibaato ah kuma la kulmi doontid mustaqbalka 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Presbyopia iyo hyperopia Maxay yihiin sideese loo daaweeyaa?
Faa'iidooyinka tababarka adoo fuulaya jaranjarooyinka